Mutsva unofungidzirwa mufananidzo wekuseri kweiyo iPhone 7 | IPhone nhau
Anofungidzirwa mufananidzo wekuseri kweiyo iPhone 7 inoonekwa paDutch webhusaiti
Yange iri nguva yakareba kubvira patakava nenhau dzechero kubvuza kana chero mufananidzo pane chimwe chinhu cheiyo iPhone 7, handiti? Zvakanaka nhasi zvaonekwa mukati webhusaiti yechiDutch una imagen yezvingave zvirizvo kumashure kweiyo iPhone 7. Mufananidzo wacho wakazviratidza kare paWeibo, iyo Chinese Twitter uye network uko zvakawanda chaizvo zvinowoneka pamberi pese pese, asi pane imwe tsananguro (zvirinani) iyo pachezvangu inoita kuti ndifunge kuti iwo mufananidzo ndewekunyepedzera.
Kana iwe ukatarisa zvakanyanya pamufananidzo, unogona kuona zvakakwana kuti kamera iri kumucheto kupfuura iyo yeiyo iPhone 6 / 6s (yakanaka) uye mitsara yeiyo antennas haichayambuki mudziyo (wakanaka), uchingogara pane kumusoro micheto uye pasi. Asi zvese runyerekupe uye kudonhedza mamodheru uye schematics zvakabatana muchinhu chimwe: iyo iPhone 7 haizobatanidzi rin'i yekudzivirira iyo yakakomberedza kamera yemamodheru apfuura, kana zvisiri izvo ichava iyo dzimba yakaremara nenzvimbo iyoyo inovhara nekuchengetedza kamera.
Mufananidzo weiyo chaiyo kana nyepera iPhone 7?
Pamusoro pezvo, pane imwezve tsananguro inoita kuti ndifunge kuti mufananidzo uyu kunyepa: kana tikatarisa mutsetse weiyo antenna kubva kumusoro kuenda kuruboshwe, tinoona kuti panosangana mitsara (iyo yakatenderedza kumucheto wepamusoro uye iyo iyo, kana iripo, yaizopfuura kuburikidza nekasi kubva kuchikamu kuenda muchikamu) pane vertex. Mune ese madhirowa, madhayagiramu, mazano, nezvimwewo, kuti vertex haipo, yakatsanangurwa zvishoma.
Pamazuva atiri pano, tinofanirwa kujaira kuona mafoto seaya angangoita svondo rega rega. Vamwe veavo vatinoti isu tinotenda kuti ivo havazi vechokwadi vanozopedzisira vava kudaro, sezvazvakaitika nemifananidzo yekutanga ye iPhone 6, apo pasina munhu aifunga kuti Apple yaizovhura mudziyo neiyo mitsara yakaipa pa kumashure. Iwe unofunga kuti uyu mufananidzo uri wechokwadi here?
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone Zviteshi » iPhone 7 » Anofungidzirwa mufananidzo wekuseri kweiyo iPhone 7 inoonekwa paDutch webhusaiti
Yomvi inogadziridzwa uye ikozvino inobvumira zvemukati kuti zvidhindwe
Apple inotangisa yechipiri beta yeTVOS 10 uye watchOS 3.0